Reckless to aid Mugabe - The Catholic Leader
Reckless to aid Mugabe
CAPE TOWN (CNS): South Africa would be “most reckless” to send aid to Zimbabwe, which is “in absolute chaos”, said the president of the Southern African Catholic Bishops’ Conference.
“Giving money to (Zimbabwe President Robert) Mugabe can be compared to giving money to an alcoholic beggar who tells you he has given up drink and will spend the money on food,” Cardinal Wilfrid F. Napier of Durban said in a mid-July phone interview.
The cardinal had returned from a two-day trip to Zimbabwe as part of a delegation with the ecumenical South African Council of Churches.
President Mugabe is reportedly seeking a loan from South Africa to pay for electricity, fuel and food to offset chronic shortages.
South Africa is in talks with the Zimbabwean Government and may end up aiding its neighbour financially, South African President Thabo Mbeki told reporters on July 24.
Cardinal Napier said Zimbabweans would be better served through donations to Churches and humanitarian aid agencies because President Mugabe probably would squander the funding.
Youth invasion starts
Good News up in lights
Push for fair trade choice